WordPress: 3 Sababood oo loo rakibo Jetpack Hada! | Martech Zone
Arbacada, December 4, 2013 Khamiis, Juun 9, 2015 Douglas Karr
Xalay waxaan ku raaxeystay inaan marti ku ahay #atomicchat Wadahadalka Twitter ay maamusho dadka cajiibka ah ee Gaaritaanka Atomiga. Waxaan ka wada hadlaynay waxyaabo badan oo loogu talagalay WordPress iyo hal plugin oo aan ku qasbanaaday inaan dhowr jeer keeno Jetpack.
Jetpack supercharges aad is ‑ marti WordPress site la awooda daruurta laga cabsado ee WordPress.com.
Waxaad booqan kartaa Jetpack loogu talagalay bogga WordPress wixii faahfaahin dheeraad ah, laakiin 3 astaamaha muhiimka ah ayaa ii muuqda:
Haddii aadan si wanaagsan ugu akhriyi karin bartaada mobilka, inbadan oo kamid ah dadka ku soo booqda waxay u badan tahay inay damiin kugu yihiin. Warka fiicani waa inaadan kubixin tan lacag ah mawduuc cusub oo jawaab celin ah ama mobiil kudar ah, WordPress waxaad ku dabooashay mawduuc moobiil fudud oo fudud oo si cajiib ah uga shaqeeya sanduuqa.
Haddii aan wax cabasho ah qabo, waxay noqon laheyd in dulucda aan dhab ahaan lagu keydin galka mawduuc - markaa haddii aad wax ka beddel ku sameyso, cusbooneysiinta qalabka wax lagu keydiyo ayaa tirtiri doonta. Intaa waxaa sii dheer, barnaamijyada barnaamijyada moobiilka sida iTunes waxay bixiyaan macluumaad meta ah oo soo boodaya badhanka rakibida barnaamijka goobta. Tani waxay noqon laheyd muuqaal weyn oo loogu talagalay kumbuyuutarkan.
On Martech Zone, waxaan leenahay wicitaano firfircoon oo ficil ku saleysan qeybaha. Haddii aad aqriso maqaal ku saabsan warbaahinta bulshada, dhinaca geesku wuxuu soo bandhigayaa wicitaan warbaahinta bulshada ah oo ficil ah oo ka socda kafaala-qaade. Si fiican ayey u shaqeysay laakiin waxay u baahan tahay inaan barnaamij ka dhigno qalabkeena si aan u shaqeyno. Mar dambe maahan! Jetpack la yimaado a aragti Ikhtiyaar kuu oggolaanaya inaad dejiso sharciyo adag marka la soo bandhigayo qalab khaas ah.
Xayeysiinta bulshada ee macluumaadkaaga ikhtiyaar uma ahan mar dambe, waxay muhiim u tahay istiraatiijiyadda guud. WordPress waxay xallisay caqabaddan adoo ku daray awoodda lagu baahin karo farriimahaaga dhammaan shabakadahaaga bulshada. Waxaan rajaynayaa iyaga oo ku daraya Google+ oo waxay u badan tahay inaan u beddeli doono bartayada u gaarka ah qalabkan isla marka lagu daro. Waxaan hadda isticmaalnaa WordPress ilaa Buffer plugin iyo keyd si aad ula wadaagto qoraaladayada.
Waxaa laga yaabaa in ugu muhiimsan la Jetpack taasi waa inay ku dhalatay WordPress oo ay dhisteen horumariyayaal WordPress ah. Marka la eego tayada waxyaabo badan oo ka mid ah suuqa, waa wax cajiib ah in la helo ilahaan lagu kalsoon yahay! Ku rakib Jetpack hadda oo ka faa'iideyso astaamahan iyo kuwo badan oo badan!
Tags: widget firfircoonmawduuca wareegastatsaragtiWidgetplugin WordPress
Sidee Cilmi Baadhista Aasaasiga ahi Brands ugu beddelaan Hogaamiyaasha Warshadaha